FFKM / Fanambarana – FJKM
FFKM / Fanambarana
Ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) , manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny , amin’ny famaliana ny antson’i Kristy manangana azy ho Mpaminany eto amin’ny firenena, araka ny nambarany hoe: « Ianareo no fanasin’ny tany……..Ianareo no fahazavan’izao tontolo izao »(Matio 5:13-14).
1- Mampahery ny vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana amin’ny fiatrehana ireo zava-tsarotra samihafa mifamahofaho eo amin’ny fiainany ankehitriny.Aoka tsy hiraviravy tànana, fa hanankim-po amin’Andriamanitra, Ilay Ray be fitiavana efa niteny hoe : « efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko……efa reko ny fitarainany » (Eks 3.7);
2- Mampirisika ny vahoaka Malagasy handeha hifidy amin’ny fifidianana ho avy, ary hahay mifidy ny olona hametrahana ny fitokisana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Mahaiza mifidy mba tsy hanenenana any aoriana, ka ny olona hofidina dia mba ho:
– olona matahotra an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina
– olona hita fa vonona hanompo ny vahoaka sy ny firenena
– olona efa hita fa afaka hahavita zavatra hanangana ny firenena
– olon’ny fisokafana, hanaiky hiara-miasa amin’ny ankolafin-kery samihafa
– olona mendrika eo amin’ny fitondrantenany sy ny amin’ny fahamarinana.
3- Tena adidintsika Kristiana ny mifidy. Vitao ny adidinao. Manentana ny Kristiana rehetra.Mitafia fahavononana. Sahia mandray andraikitra eo amin’izay manandrify antsika avy, indrindra eo amin’ny fitandroana ny fahamarinana eo amin’ny fifidianana ho avy. Ndao hiombom-peo hiteny hoe : « hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko » ( Est 8.6);
4- Miantso ny Governemanta sy ny CENI mba hanamarina tsara ny lisi-pifidianana , mba hitandro toy ny anakandriamaso ny fitantanana ny fifidianana indrindra ny fanajana ny safidim-bahoaka mba tsy hampisy olana na krizy intsony.
5- Mampahatsiaro anareo mpikambana ao amin’ny HCC ny havesatry ny entana eo an-tsorokareo amin’ny fitandroana ny FAHAMARINANA. Mampahery anareo tsy ho solafaka mamindra na ho kenda mitsako.
Dia homba antsika mianakavy anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra Ray ary ny fiombonana amin’ny Fanahy Masina .
Antananarivo faha 19 Aogositra 2018
Amin’ny anaran’ny Filoham-Piangonana 4 mirahalahy:
Monseigneur ANDRIANARIVELO Samoela Jaona, Filohan’ny EEM
Andriamatoa IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi ,Filohan’ny FJKM
Pastora Dr RAKOTONIRINA David , Filohan’ny FLM
Monseigneur Marie Arsène Odon RAZANAKOLONA, Filohan’ny EKAR
| | 17. Ala XXIV man Trinite SAMPATI
Isa 35.3-10/ Mar 13.24-27/ Joda 14.-15